UColin van der Sluijs 'oqweqwe lwegrafiti kunye nemizobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Colin van der Sluijs 'igrafiti eqhumayo kunye nemizobo
Ukusuka kwezona nkcukacha zincinci zibonakaliswe kulwakhiwo olunamabali amaninzi, igcisa laseDatshi UCollin van der Sluijs ichaza "Uyolo lomntu kunye nokuzabalaza kubomi bemihla ngemihla". Ukusebenza ngaphandle kweziketshi okanye amanqaku, umzobi uzintywilisela kuwo wonke umsebenzi wobugcisa ngemizobo ngaphakathi kutshizwe, iiacrylics y i-inki, kunye neengcamango zakhe zibambe, imifanekiso ivela ngokukhawuleza. Izihloko ezivela kwindalo yendalo, ezinje ngomjikelo wobomi, ukumelwa kweentlobo ngeentlobo zeentaka, kunye novavanyo lwengqondo lomntu nolwezilwanyana zihlala zivavanywa.
UColin van der Sluijs yayilixesha lokugqibela eChicago, apho wagqiba khona umzobo omkhulu Kwipaseji yobuGcisa beWabash, ebonisa iintaka ezimbini ezisengozini yokufa eIllinois, phakathi kogqabhuko lweentyatyambo. Uye wavula umboniso wakhe wokuqala e-US enesihloko "Luctor Et Emergo", ebonelela uluhlu olubanzi lwepeyinti kunye nemizobo.
Isuntswana ngobomi bakhe: Kwiminyaka eyi-12 waya esikolweni eyokufunda ngemizobo yesiko eGoes, eNetherlands, apho wafunda khona ubugcisa bokupeyinta kwakudala kunye ithiyori. Ngo-1996 waphumelela kwaye wamkelwa eSt Lucas eBoxtel, eNetherlands. Uphumelele e-2000 kwi-'Art-academy yaseSt.Joost eBreda ', eHolland. Wafunda umzekeliso iminyaka emi-4. Emva kokuthweswa isidanga kwisikolo sobugcisa iSt. Joost wafudukela emazantsi eNetherlands, apho ahlala khona kwaye esebenza kwimiboniso nakwiiprojekthi.
Umsebenzi wakhe unokuchazwa njenge uyolo lomntu kunye nokuzabalaza kubomi bemihla ngemihla. Umsebenzi kaCollin van der Sluijs upapashiwe kwiimagazini, ezincwadini, kwaye uboniswa kwiigalari nakwiindawo zeprojekthi, okanye ezindongeni zaseNetherlands, eJamani, eFransi, eNgilani, eBelgium, eMelika, eLuxembourg, e-Itali, e-UK, España. Nantsi igalari ngemisebenzi yakhe emangalisayo.
Imvelaphi | UCollin van der Sluijs
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Colin van der Sluijs 'igrafiti eqhumayo kunye nemizobo
Ukuhonjiswa okumangalisayo kwiirakethi, izihlangu kunye neengcingo zikaDanielle Clough
Imizobo kunye nepeyinti efakela ubuchwepheshe, uburharha, kunye nendalo ye-'Wes21 '